Niova fo Malagasy ariary Ny US dolara
Firenena Mikambana tahan'ny fifanakalozana angona amin'ny 04/12/2021 20:00
Malagasy ariary Ny US dolara convertion. Malagasy ariary vidin'ny US dolara androany amin'ny tsena fifanakalozam-bola.
10 000 Malagasy ariary = 2.51 US dolara
Ny fampahalalana momba ny fiovan'ny Malagasy ariary mankany US dolara havaozina indray mandeha isan'andro. Ny tontolon'ny fifanakalozana vola dia atao any amin'ny banky. Ny vaovao momba ny tahan'ny vola. 1 Malagasy ariary dia 0.000251 US dolara. 1 Malagasy ariary dia nisondrotry ny 0 US dolara. Ny tahan'ny Malagasy ariary dia nitombo ny fanoherana ny US dolara nataon'i 0 zato heny tamin'ny isa isan-jato.
Taham-panakalozana Malagasy ariary Ny US dolara
Iray volana lasa izay, ny vidin'ny Malagasy ariary dia azo amidy ho an'ny 0.000252 US dolara. Telo volana lasa izay, ny Malagasy ariary dia azo atakalo ho an'ny 0.000255 US dolara. Enim-bolana lasa izay, ny vidin'ny Malagasy ariary dia azo vidina ho an'ny 0.000265 US dolara. 0.04% - fiovana ny tahan'ny fifanakalozana ny Malagasy ariary to US dolara isan-kerinandro. Ny fanovana ny fifanakalozana fifanakalozana ny Malagasy ariary to US dolara mandritra ny iray volana dia -0.34%. -1.14% isan-taona - ny fiovan'ny tahan'ny fifanakalozana ny Malagasy ariary.
Taham-panakalozana Malagasy ariary (MGA) Ny US dolara (USD) Miaina amin'ny fifanakalozana Forex tsena
Mpandrindra vola Malagasy ariary US dolara
Malagasy ariary (MGA) Ny US dolara (USD)
10 000 Malagasy ariary 2.51 US dolara
50 000 Malagasy ariary 12.55 US dolara
100 000 Malagasy ariary 25.09 US dolara
250 000 Malagasy ariary 62.74 US dolara
500 000 Malagasy ariary 125.47 US dolara
1 000 000 Malagasy ariary 250.94 US dolara
2 500 000 Malagasy ariary 627.35 US dolara
5 000 000 Malagasy ariary 1 254.71 US dolara
Androany 0.002509 USD = 10 MGA. Raha manana 0.006274 US dolara, dia ao amin'ny ny British Virgin Nosy dia afaka mividy ny 25 Malagasy ariary. Androany, ny 50 Malagasy ariary dia azo amidy amina 0.012547 US dolara. Mpanakalo fiovam-po ankehitriny ho an'ny 100 Malagasy ariary manome ny 0.025094 US dolara. Azonao atao ny mividy 0.062735 US dolara ho an'ny 250 Malagasy ariary . Ny mpanakalo fiovam-po ankehitriny dia manome ny 0.13 US dolara ho an'ny 500 Malagasy ariary.
Malagasy ariary Ny US dolara Taham-panakalozana
Malagasy ariary Ny US dolara amin'izao fotoana izao 04 Desambra 2021
04.12.2021 0.000252 1.45 * 10-6 ↑
03.12.2021 0.00025 -1.1 * 10-6 ↓
02.12.2021 0.000251 3.27 * 10-6 ↑
01.12.2021 0.000248 -1.37 * 10-6 ↓
30.11.2021 0.000249 1.74 * 10-6 ↑
Androany ao amin\_'ny 4 Desambra 2021, 1 Malagasy ariary 0.000252 US dolara. 3 Desambra 2021, 1 Malagasy ariary ny vidin'ny 0.00025 US dolara. 2 Desambra 2021, 1 Malagasy ariary ny vidin'ny 0.000251 US dolara. Ny ambony indrindra Malagasy ariary to US dolara ho an'ny volana farany dia ao amin'ny 04.12.2021. Ny kely indrindra Malagasy ariary to US dolara ny tahan'ny fifanakalozana ho an'ny volana lasa dia ny 01.12.2021.
Malagasy ariary Ny US dolara ny tahan'ny fifanakalozana tantara
Malagasy ariary sy US dolara vola sy ny firenena